विचित्र संसार Archive - Page2of2- चारदिशा
ट्राफिक जामका कारण झण्डै एक जोडीको विवाह खतरामा परेन । धन्न रेडियोले यो जोडीको विवाहलाई सम्भव तुल्याइदियो, जामलाई निस्तेज पार्दै । घटना चीनको हो । चिनिया मिडियाहरुमा निकै चर्चा पाएको यो घटना अक्टोबर १ को हो । झिनजियाङ प्रान्तको शीशी इलाकामा बस्ने यान मेंगशियाको विवाहका लागि विवाह समारोहमा...
बिह गरेँ हतारै हतारमा फुर्सदैमा लाग्छ पछुतो भन्ने उखानै छ । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा पछुताउने महिला पुरुषको संख्या धेरै हुन्छ । कतिले जोसमा त कतिले बाध्यतामै बिहे गर्छन् र बिहे पनि आफ्नो जिवनसाथी देखेर वाक्क हुन्छन् । जसका कारण वैवाहिक जिवन तहस नहस बन्न थाल्छ । बेलायतमा गरिएको...
महिलालाई कतिसम्म हेँप्न सकेको हँ ? हुँदाहुँदा गाडीको ढोका नलगाएको आरोपमा समेत एक लोग्नेले आफ्नी स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । लोग्नेको यस्तो ज्यादती हाम्रो देशमा चाहीँ होइन । यो साउदी अरबको घटना हो । समाचार अनुसार श्रीमतीले कारको ढोका बन्द गर्न नमानेको भन्दै उनले डिभोर्स गरेका हुन् ।...
बाँदरले के को वर्षा गर्ला ? रुखमा चढेको बाँदरले हल्लाएरै भएपनि रुखका पात, फल वा आफ्नै मल र जलको वर्षा गर्ल बढिमा । तर एउटा बाँदरले भने पैसाको वर्षा गरेको छ । भारतको सिमलास्थित एक मन्दिर परिसरमा बाँदरले १ सय भारुका नोटको वर्षा गरेको हो । सिमलाको कामना देवी...